ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ဗကသများ ဈေးရောင်းကြပြီ ~ Myanmar Express
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ဗကသများ ဈေးရောင်းကြပြီ Wednesday, February 27, 2013
ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ခရိုင်ကျောင်းသား များသမဂ္ဂ (ရ.တ.က.သ)၏ ရန် ပုံငွေ ဈေးေ ရာင်း ပွဲအဖြစ် သံလျင်မြို့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ခေါက်စေ တီတော်မြတ်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိ ယပွဲေ တ်ာကြီးတွင် ဆိုင်ခန်း ဖွင့်လှစ်ပြီးရောင်း ချလျက် ရှိသည်။ ရန်ကုန်ေ တာင်ပိုင်း ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (ရ.တ.က. သ) အနေဖြင့် ဗ.က.သများ အဖွဲ့ ချုပ် ၏ မူဝါဒ လမ်းစဉ်(၅)ရပ်နှင့် ကိုက်ညီသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမို ကရေ စီ အရေးနှင့် ပြည်သူအကျိုး ပြုရေးလုပ်ငန်းများကိုကျောင်းသား /သူများ၏ မုန့်ဖိုးများဖြင့်
သမဂ္ဂ လစဉ် ထည့် ၀င်ကြေး များကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း များပြားလှသော လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် သမဂ္ဂ ရန်ပုံငွေ မလုံ လောက်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်း ပွဲပြုလုပ် နေရခြင်းဖြစ်ပြီး ရရှိ လာေ သာ အမြတ် အစွန်း များကို ဗက သများ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပြည်သူ့ အကျိုး ပြုလုပ် ငန်းများနှင့် ကချင်စစ် ဘေး သင့်ပြည် သူ များ အတွက် အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောင်းသားတွေကို အနှောက်အယှက်ပေးမယ်။ အုပ်စုဖွဲ့မယ်။ ဆူပူမယ်
အဝေမတည့်ဖြစ်မယ်။ အစိုးရကို ကန့်လန့်လုပ်မယ်။
အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံမတင်၊ ကျောင်းသားမဟုတ်သူတွေက ကျောင်းသားတွေကို ခေါင်းဆောင်။
ပထမ ဘုရားပွဲမှာ ရောင်းမယ်။ ပြီးရင် ကျောင်းခန်းတွေမှာ ရောင်းမယ်။ ပြီးရင် သပိတ်တွေ ဆူပူတဲ့ နေရာ တွေမှာ ရောင်းမယ်။ ဗကသကြီးများ စားသောက်နေထိုင်စရိတ်က လိုလာပြီလေ...
Posted in: ဘာလဲဟဲ့ ဗကသ,သတင်း
min dote htoe
We r poorer than before not because of ba ka tha but because of MEG supporting group.By the way,MEG daren't to write about Eleven now.Bravo! Anonymous
Over Ground BCP.
အရှင်အဂ္ဂဓမ္မ နှင့် မူဆလင်ဘင်ဂါလီတို့၏ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်များ
ဘာသာခြားများ၏ အနိမ်ခံဘ၀မှ လွှတ်မြောက်ရေး ကျိုးပမ်းခဲ့ရသော သစ္စာတရား လမ်းကြောင်းကို ဘင်ဂါလီ မုဆလင်စစ် စစ်တို့၏ နှလုံးသား ငိုရှိုက်သံ နှင့် သက်သေများကို ဖွင့်...
ပြောမရဘူး ခုချိန်လောက်ဆို မာမားစု ငိုချင်ငိုနေမှာ၊ သူကသူ့ သားသား ကုလားလေးတွေကို အရမ်းသနား အရမ်းချစ်တာ ဆိုတော့လေ # ပြည် ထောင်စုအဆင့်အနေဖြင့် ရခိုင် ပြည်...